Iindaba - I-J.able Bio Saliva Collection Kit
Umqokeleli wamathe ukwabizwa ngokuba yisampler yamathe, isixhobo sokuqokelela amathe, ityhubhu yokuqokelela amathe eDNA.
Amathe ngumxube ontsonkothileyo ongaqulathanga kuphela iiproteni ezahlukahlukeneyo, kodwa kunye ne-DNA, i-RNA, i-fatty acids, kunye nee-microorganisms ezahlukahlukeneyo. Uhlolisiso luye lwafumanisa ukuba iinxalenye ezahlukahlukeneyo zeprotheyini ezisegazini zikwakho kumathe, yaye amathe anokubonakalisa utshintsho kumanqanaba eeproteni ezahlukahlukeneyo ezisegazini. Ngoko ke, kunokwenzeka ukufumanisa izifo ngokufumanisa amathe.
Ngenkqubela phambili yoluntu kunye nokuphuculwa okuqhubekayo kwemigangatho yokuphila yenkcubeko, abantu baneemfuno eziphezulu kunye neziphezulu kwiimviwo zonyango, ezifuna ukungazinzi, okulula, kunye neendlela zokuvavanya ngokukhawuleza kunye neendlela zokuxilongwa. Xa kuthelekiswa nemizekelo ye-serum, ukuqokelela amathe kukhuselekile kwaye kulula, akunabungozi, ngaphandle kwengozi yokusasazeka kwezifo ezisasazwa ngegazi, akukho zintlungu kwizigulana, kwaye kulula ukuzamkela. Xa kuthelekiswa neesampulu zomchamo, amathe anenzuzo yesampulu yexesha lokwenyani. Uphando malunga nokubhaqwa kwamathe luvuse umdla omkhulu kwaye ezinye iziphumo zokuqala zifunyenwe. Ukufunyanwa kwamathe kuye kwasetyenziswa ngokubanzi.
Uvavanyo lwe-saliva lunokwenziwa kwiindawo ezahlukeneyo, kubandakanywa kwicala lendlela, kunye nokubonelela ngolwazi oluxabisekileyo lokuxilonga. Amathe asetyenziselwe i-HIV, intsholongwane ye-HBV, kunye neziyobisi ezahlukeneyo ezifana ne-cocaine, uvavanyo lotywala, uvavanyo lwemfuzo, uvavanyo lwentsholongwane, njl.
Inkcazo yemveliso yekhithi yokuqokelelwa kwamathe:
Ikiti yokuqokelela amathe yenziwe ngefaneli, ityhubhu yesampula, kunye nesisombululo sokugcina. Ifunnel inokuthumela amathe ngokuthe ngqo kwisithinteli esizinzileyo esingeyotyhefu. Kukho imigca ecacileyo yokuphumelela kumphezulu wokuqokelela amathe. Ikulungele kakhulu ukuthutha isampuli kunye nokugcinwa.
Umqokeleli wamathe angasetyenziselwa ukuqokelela iisampuli ze-saliva ezifihliweyo ngumlomo womlomo, kwaye udibanise ngokulinganayo i-saliva eqokelelweyo kunye ne-saliva yokugcinwa kwamanzi, ukuqinisekisa ukunyaniseka kwe-DNA kwisampuli ye-saliva kunye nokugcinwa kwexesha elide kwiqondo lokushisa. Emva kokuba isampuli ikhutshwe, isetyenziselwa ukuxilongwa kwekliniki ye-in vitro.
1. Gcoba ngobunono i-2ml yamathe kwindawo yokuqokelela amathe.
2. Thela isisombululo sokugcina kwi-saliva kwaye uqinise isiciko.
3. Gququzela phezulu naphantsi ukuxuba amathe nolwelo logcino ngokulinganayo.
4. Beka ityhubhu yesampula kwingxowa ye-biosafety ukuze ihlolwe.
5. Lahla ifaneli.
Qaphela: Ngenxa yokuba i-DNA ayikhutshwa kwi-saliva ngokwayo, kodwa kwiiseli ezikhutshiweyo eziqulethwe kumathe. Ke ngoko, xa uqokelela iisampulu zamathe, nceda uzame ukusebenzisa ulwimi lwakho ukukrwela umhlathi ongasentla nongezantsi kaninzi kangangoko, kwaye usebenzise amazinyo akho ukukrwela ulwimi kancinci ukuqinisekisa inani leeseli ezikhutshiweyo. Ngoko ke, musa ukutya, ukusela, ukutshaya, njl. phambi kokuba uthathe isampuli.
I-Nasopharyngeal Swab yabantwana, Iityhubhu zeMicrocentrifuge eziNdlongo, Buccal Swab Collection Kit, Iityhubhu ze-Falcon Centrifuge 15ml, Ikhithi yeMidiya yoThutho lweNtsholongwane, Imibhobho yeCentrifuge eZimeleyo,